caws engegan oo kale Cabitaanka
warqad u sadaaliyay
warqad duubo caws engegan oo kale
caws engegan oo kale warqad
Uurqaadida polymer REVODE105
REVODE105 waa mid noocee ah modified uurqaadida kaas oo si gaar ah loogu talagalay dhuuqo hufan.
Guryaha ee REVODE105
Uurqaadida cusbi REVODE105 hababka Imtixaanka
Mugga (g / cm3) 1.25 ± 0.05 GB / T1033-1986
Dhalaali socodka heerka (g / 10min, 190 ℃ / 2.16Kg) 3-8 GB / T3682-2000
heerkulka Heat dhalanrog (℃) 60
Heerka yaraanshaha wax taaj oo kale (dhalaalid isku midka ah jihada socodka) 0,005 ISO294-4: 2001
yaraanshaha wax taaj oo kale (dhalaalid toosan jihada socodka) 0,003 ISO294-4: 2001
xoog siligga (MPA) 45-60 GB / T1040-2006
Muruqa qeybtii (%) ≥ 10 GB / T1040-2006
xoog Impact (KJ / m2, Izod) 3 GB / T1043-2008
The REVODE105 cusbi uurqaadida ku haboon yahay processing ee lagu dhuuqo si toos ah aan kulaylka u adkaysta oo hufan, oo aan ku haboon dhuuqo qalooca.
cusbi REVODE105 The loo samayn karo on polypropylene (PP) mashiinka wax taaj oo kale caws buu u extrusion dhaqanka. Marka baaraandegidda, fadlan ogsoonow:
I: heerkulka processing The (heerkulka gaar ah u baahan in la filaayo):
Kuleyli qaybta hore (meel u dhow cunaha feed): 130-150 ℃, qaybaha kale: 160-180 ℃ uurqaadida cusbi REVODE105 ka bilowdey barafka heerkulka kor ku xusan 60 ℃, lacala haddii heerkulka oo aad u sarreeya ee cunaha quudinta keenaysaa in agglomeration cusbi iyo quudinta unsmooth, waxaa lagu talinayaa in ku shub biyo qaboojinta galay jaakada ee quudinta qaybta cunaha.
Maxaa yeelay, REVODE105 waa ka jilic badan cusbi PP dhaqanka, labada jebin laga yaabaa in markii jarida biibiile. Waxaa lagu talinayaa in la xakameeyo heerkulka biyaha ee haanta biyaha u dhexeeya 35 iyo 40 ℃, loo hubiyo in biibiile leeyahay heerkul sare markii jarida, sidaas looga fogaado qoslaan fudud.
II: Color qasayso
Haddii alaabta loo baahan yahay in la midab leh, hubi in aad isticmaasho toner midab gaar ah ama ku salaysan uurqaadida Dufcaddii sayidkiisa midabka. toner aan habboonayn ama midabka sayidkiisa Dufcaddii keeni karta in wax soo saarka debcaan, dusha saarka unsmooth iyo xitaa awoodin in ay extrude.
Haddii qalabka qasayso midab aan la isticmaali karaa ilaa 2 saacadood gudahood, waxaa lagu talinayaa ma isticmaali 25 kg / cusbi bac oo dhan hal mar, halkii, isticmaali badh ka mid ah iyo xir qeybtii kale ee la aalad quwad kulul at mar. Ujeedada waxay tahay in la kashifo wax in hawada sida gaaban ee suurtogalka ah.
REVODE105 ayaa baaraandegi by qalajinta crystallization, iyo content qoyaanka ka yar than400 ppm. cusbi in lagu kaydiyaa bac-bireed Aluminum, ilaaliya sanduuq ama bac ka baxsan in si toos ah loo isticmaali karaa. Ka dhig baakada la shaabadeeyey ilaa diyaar in la isticmaalo iyo si dhakhso ah reseal wax kasta oo aan la isticmaalin, ama dumin kara ka nuugaya qoyaanka. Ka dib markii badan, cusbi u soo bandhigi kartaa dhaqdhaqaaqa dheeraad ah inta lagu guda jiro geeddi-socodka, iyo waxyaabaha ay leeyihiin waxaa laga yaabaa in hantida debcaan, yaraanshaha dusha. Haddii cusbi u bandhigi in jawiga saacad ka badan hal, waa in la dib-u-qalajiyey hor inta aadan isticmaalin, haddii kale, cusbi ah in si toos ah loo isticmaali karaa. suuragalnimada in ahmiyadda ugu qoyaan ma laga saari karo, hadii cusbi u bandhigi in jawiga qoyaan sare.
Marka dib-u-qalajinta cusbi ah, hawada kulul ee un-dehumidified waa xaaraan, waayo, iyada oo aan rido, ma aha oo kaliya saamayn qalajiyo ma laga heli karaa, laakiin sidoo kale xawaaraha absorbance biyaha ee cusbi uurqaadida la degdegsiimada karaa. Hawada dehumidified damaanad qaadi kara saamayn qalajiyo of dumin kara uurqaadida in desiccator. Marka la isticmaalayo foorno guud, qalabka dehumidification waa in la isticmaalaa si loo dehumidify hawada ee taxanaha oven.SD-H of dehumidifiers nooca malabkii-giraangiraha-bixisey by Shini uurqaadida stics Technologies Inc. waxaa si xoog leh lagula talinayaa qalajiyo uurqaadida, qalabkii kale ee la isku saamayn dehumidified ayaa sidoo kale waxaa lagu qaadan karaa.
xaaladaha qalajiyo caadiga ah waxa lagu tusayaa jadwalka hoose:
Halbeegga qalajiyo Settings caadiga ah
Waqtiga joogitaanka (saacadood) 2-3
Heerkulka Air (℃) 80 (Heerkulka foornada caadiga ah)
Air sayaxa Point (℃) -40 (Heerkulka of rido)
Air Flow Rate (m3 / cusbi hr-kg) > 1.85
Fiiro u yeelo:
Xir ku wareerid ka hoose ee Ayaxaasi iyo saartaan foosto marka la xidho mishiinka muddo gaaban (30 min), iska ilaalinta ku furid cunaha masruufaan. Fur ku wareerid iyo quudin cusbi dib markii uu xaqiijiyay in ay dib u bilaabaan duro.
Haddii labiska midabka iyo wadnay dhacay intii lagu jiray isaha, isla markiiba foosto ka saartaan si ay u dhawraan gobolka mid ah waxyaabaha la. Hay socda haddii maaddadu ay tahay mid caadi ah, ama qabsato xuduudaha.
daaweynta Recovery qalabka nadiifka ah,
The alaabta aan u qalmayn soo saaray habka soo saarka revode105 loo samayn karo oo ka baaraandegi leh saamiga materials.The cusub ee Intaa waxaa dheer waa in aanay noqon mid aad u weyn, haddii kale wax soo saarka waxay noqon doontaa mid aad u debcaan.
The alaabta dib loo isticmaali waa la daaweyn karaa in soo socda laba siyaabood:
In geeddi-socodka ah ee wax soo saarka, waa si toos ah comminuted iyo Waxyoonay Ayaxaasi habka automatic feeding.The wax cusub waa isticmaalka isku dhafan, laakiin waxay u baahan yihiin si loo hubiyo in heerkulka baaldi waa ma ka badan 60 digrii, haddii kale waxaa laga yaabaa in wax dhegdheg ( hab lagu talinayo isticmaalka)
Next: 60gsm White Kraft Paper Roll Waayo Paper Straw
Anti been-abuurka Hologram Thread
automatic fidhicil xirxirida Machine
Baby Cotton hari
Baby Nadiifinta Dhegaha
baaba'aysa caaga qaydhiin Waxyaabaha
nabarrada Daboolayo xirxirida Machine
C1s Kraft dalaka
xanjo Baako Ciridka
iyo burooyinkeeda Cotton dhegaha
Sticks Cotton suuf
dhegaha Nadiifinta eekoow Cotton Bud
Label Curdin ah
Machine Baako Automatic Full
Guddiga dalaka Kraft
salaar Machine xirxirida
sminke Cotton hari
Dabiiciga / Buff Color
Barkimeed Machine xirxirida Price
Uurqaadida cusbi Waayo, duritaanka Grade
Uurqaadida cusbi In qalleyf Sare
Caaga ku eekoow Cotton suuf
Polypropylene Fabric biyaha
qaydhiin Wood saxarka Kaarboor Gray
Single fidhicil xirxirida Machine
dhimbiil Dillaaca Baakadaha Machine
Daad kartoo Daabacaadda
Tube Baako Khamri
Wooden caaga eekoow Cotton suuf